Talo ku socoto Madaxweynaha Dacweysan ee Somaaliyeed! [Qormo Xildhibaan doortay Farmaajo] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa qoraal talo soo jeedin ah u diray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, isagoo sheegay inuu doortay Farmaajo, isla markaana u garab maray dhammaan wixii lagu doortay.
HOOS KA AKHRISO FARRIINTA
-Mudane Farmaajo, waxaan ku rajo weynahay inaadan inkiri karin sidaan qeyb uga ahaa guushaadi VILLA SOOMAALIYA aad ku timid. Waxaan ula jeedaa, inaan kuu caddeeyo inaad garab martay dhammaan waxyaabihi aad ii sheegtay, kuguna doortay oo ay ugu horreysay DANTA DALKA IYO DADKA inaad wax walba ka hor marinayso.
– Aniga oo ixtiraamayo inaad tahay Bani’aadam Khalad geli karo (Macsuum ma tihid), arimaha qaarkoodne ka hoos bixi karaan waxaan kuu soo jeedinayaa inaad;
1. Noqoto Hoggaamiyaha talada leh, go’aan qaadan karo, islamarkaasne ka leexato talooyinka gurracan oo ku dabin-daabyaynayo.
2. Xasuusnaato inaad xilka kula wareegtay Nidaam qaanuuni ah oo ay ixtiraameen Madaxdi kaa horreysay, iyo sii xoojinta dhaqankaas ku saleysan Dimoqraadiyadda.
3. Joojiso isla weynida siyaadada ah oo aan loo baahneyn maanta ee aad kula dhaqmeyso Masuuliyiinta sar sare ee talada Dalka kula leh, sida GUDDOMIYAHA BAARLAMAANKA iyo Xildhibaanadi kuu doortay inaad xilka maanta qabato, Maantana diyaar u ah inay XILKA KAA QAADAAN, waa haddii ay ku guuleystaan.
4. Guddoomiyaha Baarlamaanka aad ka qaaddo xayiraadda aad saartay oo Maanta marayso maalinti labaad oo Maamulka Madaxtooyada ka hor istaageen, iska daa inuu xor yahay ama lasoo booqan karee, waxaa laga hor istaagay cunto iyo Cabitaan loo waday xaafadda Guddomiye Baarlamanka.
– Hadaba Madaxweyne, waxaan jeclaan lahaa inaad xaaladda uu Dalku marayo hoos u fiiriso, oo aad meesha ka saarto caadifadda iyo iska celida kaa muuqato. Talo khaldanne aad qaadanin, Ilaahay ayaa hanuunka hayo ee ha ku tuso talada saxda ah.
Waan hubaa inaan u taaganahay Difaaca Dalka iyo Dadka, iyo inta samaha jecel.
Xildhibaan Khalif Cabdi Cumar.
Previous articleRa’iisal Wasaaraha Itoobiya iyo Madaxweynaha Eritrea oo Muqdisho ku soo jeeda & Wararkii ugu danbeeyay
Next articleBannaabax looga horjeedo Madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay Baydhaba & Dad lagu rasaaseeyay